Igbu m (Blog) nwayọ | Martech Zone
Igbu m (Blog) nwayọ
Wenezde, August 1, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ọbịa: Ala 33%
Mmegharị peeji: Ala 18%
Ndenye aha RSS: Ihe ruru 5%
Adsense: Ala 70%
Ọkwa Technorati: Ala 4%.
Ndị a bụ ụfọdụ ọnụọgụgụ m maka izu abụọ gara aga na blọọgụ m! Maka ndị ọbịa m oge niile, ị ga - achọpụta na anaghị m ede blọgụ oge ọ bụla - otu n'ime iwu ndị ahụ ị na-agaghị agbaji. Gingde blọgụ bụ maka ihe niile ọkụ. Ozugbo ị gbasiri ike, ọ nweghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi weghachite azụ.
Achọpụtala m ụfọdụ ndị na-ede blọgụ na-arụ ọrụ dị egwu nke ịmejupụta ohere nwụrụ anwụ site na:
Recapping kasị ewu ewu blog posts.
Inwe ndị na-ede blọgụ.
Dọrọ na obere vidiyo (vidiyo ma ọ bụ ụda) dị na isiokwu ma dị site na Youtube na ọwa ndị ọzọ.
Nanị ụzọ m na-ewere bụ ịga n'ihu na-ezipụ Del.icio.us njikọ. M kwụsịrị ide ihe, na-eche echiche banyere ide ihe ma kwụsị isonye na mkparịta ụka blog ndị ọzọ. Otu n'ime ihe kpatara na etinyeghị m ụzọ ndị ọzọ iji jide ndị na-agụ akwụkwọ bụ na m mere chọrọ ịhụ ihe ga-eme.
Inwe ihe RSS ndepụta na-egosi na ọ bụ otu usoro mbipụta akwụkwọ nwere ike ijigide ndị debanyere aha (yana ọbụna ịkwalite). Enweghị m obi ụtọ, mana m ga-adị njikere ịkụ nzọ na ọ bụ ndị ọbịa bịara ebe a site na njin ọchụchọ, hụrụ ọtụtụ ndị debanyere aha m nwere, ma chee na ya kwesịrị isonye. Njikọ kwa ụbọchị site na Del.icio.us na-enye ụfọdụ uru ndị ọhụrụ ndị debanyere aha.
Ọ bụrụ na ị bụ onye debanyere aha ọhụrụ, tụrụ anya n’aka m! Anọ m n'etiti mgbanwe ọrụ ma na-ebunye onye ahịa ọrụ nkewa. Eziokwu, ana m a havingụkwa biya ma ọ bụ abụọ kwa mgbede n'izu a yana ndị ọrụ ibe m sitere na onye ọrụ m ugbu a. Ha bụ ụlọ ọrụ Inc 500 na-eto n'ike n'ike achọghị m ndị ọrụ ka ha chee na m na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ maka ụfọdụ ihe kpatara ya… M na-agagharị na nsogbu ọhụrụ na ohere dị egwu.
Mọnde ga-abụ ụbọchị mbụ m na onye ọrụ ọhụụ m na-atụ anya ya. Ka ọ na-erule ngwụsị izu na-abịa, ihe kwesịrị ị dajụọ ma m ga-alaghachi na omume. Site na ọrụ a, a ga m ekpughere ndị ụlọ ọrụ na-emepe emepe, ụlọ ọrụ ọhụụ n'ịntanetị (ahịa ụlọ nri na nkwado), teknụzụ ọhụrụ (Ntinye aka na njikọta) na e-commerce Jikere maka ụfọdụ ezigbo ọdịnaya ka m na-abanye n'ime!
Martech Zone mbilite n'ọnwụ na-abịa!
Project: Nnụnnụ Anụ Na-akparaghị ókè - Nwee obi ụtọ na Google Maps
Iwu Forlọ na FormSpring
Aug 1, 2007 na 8: 23 AM
Doug - Blog gị dị egwu. Nwee oge ọkọchị na ohere ọhụụ gbasara ọrụ gị.
Aug 1, 2007 na 10: 19 AM
Naanị chọrọ ime ka ị mara nke ahụ
M ka na-agụ. Na nso nso a, pụọ na
obodo na July a otutu na Ezumike.
Otú ọ dị, mere a igwe ndọta na
ebe nrụọrụ weebụ m. Chọta foto na blọgụ m.
Ga-enwe obi ụtọ ịhụ ihe ị
Soro Technorati mgbe ị gụsịrị banyere
ị na saịtị ha.
Ugbu a achọrọ m karịa Fav.
You nwere ndụmọdụ ọ bụla maka m?
Jisie na gị ọrụ ọhụrụ.
Aug 1, 2007 na 11: 17 AM
Echere m na ọ bụghị ihe ijuanya. Enwere m obere oge iji nyochaa faili RSS ma ọ bụghị naanị gaa na saịtị ntanetị ọ bụla. (Kwuo m okwu ahụ dum!) Iji mee ka ihe ka njọ, ọ bụrụ na onye na-ede blọgụ enyeghị nri zuru oke, anaghị m enwe ike ị gụọ mkparị ahụ ma mesịa ị gaa saịtị iji mechaa onyinye ahụ. (Ndo, taa m ụta ọzọ, ọ bụ m kpatara ya.)
Aug 1, 2007 na 1:32 PM
Inwe ezumike dị mma ma nwee ọfụma na ịkwaga ọrụ.
Echegbula onwe gị banyere nọmba. Blog nke m nwere ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ mara mma, nlele peeji na ndị debanyere aha RSS. M na-esi na StumbleUpon nweta oge site n'oge ruo n'oge mana nke ahụ gbasara ya. Mana mgbe ahụ naanị m nwere oge ịde blọgụ ugboro abụọ n'izu ka m wee ghara ịtụ anya ka ndị na-agụ akwụkwọ m na-eto n'ike n'ike.
Aga m na-agbalị a ọhụrụ dịanyā post tactic anya mee ka m na- 3 posts a izu. Aga m ahụ otu o si aga.
Aug 2, 2007 na 7: 23 AM
The Marketing Technology Blog mbilite n'ọnwụ na-abịa!
Aga m anọnyere gị mgbe ọ mere.
Aug 2, 2007 na 9: 06 AM
Ghọta ọkwa - jisie ike na mgbanwe ọrụ! Ọ na-akwado echiche gị gbasara ike, dịka ị kwuru n'ụzọ ziri ezi. Onye ọ bụla maara nke amara 2 awa na ụbọchị wijetị?! 😉
Aug 8, 2007 na 5:50 PM
You nụla banyere Quantcast, ọrụ na-enweta ọnụọgụ kụrụ site na ụdịdị dị iche iche. Not naghị agabiga njọ ma ọlị, yana ezi otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na - achịkwa iwu, 1 nke 50 ọbịa na - ekewapụta dị ka "onye ọgwụ ọjọọ":
Aug 8, 2007 na 7:15 PM
Obi dị m ezigbo ụtọ maka ndị enyi, dịka gị, ndị na-abịaghachi na-esonye na mkparịta ụka ahụ. N'ọtụtụ ụzọ, abụ m onye nyocha obser na-enyocha mkparịta ụka dị n'etiti ndị ọzọ.